ထောပတ်သီး, သခွားသီး, capers, ပန်းသီးနှင့်ဆလရီနှင့်အတူမုန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း
ဆော်လမွန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - အရသာဟင်းလျာများချက်ပြုတ် 8 မူရင်းနည်းလမ်းများ
ဆော်လမွန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - အရသာမုပြင်သစ်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်အဆငျ့, အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ကျန်းမာအစားအစာကျွမ်းကျင်သူအကြားရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါအချက်အပြုတ်လက်ရာကိုမြည်းစမ်းနိုင်ဖို့အတွက်သေချာပေါက်ကြောင့်အိမ်မှာပန်းကန်မှာချက်ပြုတ်ဖို့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်, စားသောက်ဆိုင်သို့မသွား။
ငါးအသားအလားတူနည်းပညာကနေပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း၏ပြင်ဆင်မှု၏နိယာမကြိတ်နဲ့ငါးတန်းနှင့်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများသေးငယ်တဲ့ Cube ရရှိရန်တစ်ဦးချွန်ထက်သောဓါးကို အသုံးပြု. ပါဝငျသညျ။
လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ဆားဆော်လမွန်ငါးလွှာ - ဒါဟာအရည်အသွေးကိုအခြေစိုက်စခန်းထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ငါးတစ်ခုပူးတှဲအဖြစ်မကြာခဏအနီရောင်ကြက်သွန်နီ, shallots, chives, capers, လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ် Pickled သခွားသီး, ထောပတ်သီးကိုသုံးပါ။
ငါးအတော်ကြာမျိုး, ပုစွန်ဖြည့်စွက်ထုတ်ကုန်အခြားပင်လယ်စာ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သစ်သီးပေါင်းစပ်ထားတဲ့မုန်၏မူကွဲရှိပါတယ်။
ရေစာမှ refilling အဖြစ်, ပဲပိစပ်ဆော့စ်, သံပုရာသို့မဟုတ်ထုံးဖျော်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးရေနံ, အမျိုးမျိုးသောနံ့သာမျိုးနှင့်ရာသီနှင့်အတူပိုးစာရှာလကာရည်ငံပြာရည်ပြင်ဆင်ကြ၏။
ဒါဟာကျယ်ပြန့်လှသောအဆင်းပန်းကန်များနှင့်ငါး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ချထားခြင်းကိုခံရလတံ့သောလက်စွပ်, အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးရေစာတင်ပေးသောအပေါ်ပုံစံကိုသုံးပါ, အဲဒီနောက်ပန်းကန်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဿုံဖြစ်နိုင်လတ်ဆတ်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီး, ပျော့ဖတ်အချဉ်ပန်းသီးတစ်ခုသို့မဟုတ်မှည့်သောထောပတ်သီးသကဲ့သို့ထုကုန်တယ်လတ်ဆတ်တဲ့သခွားသီး၏အရသာမုခေါငျးအုံး, အမြင်ကြည်လင်စေရန်။ ဖြစ်နိုင်သမျှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်ကင်သို့မဟုတ် crackers ပေါ်မှာ။
မကြာခဏငုံးဥအနှစ်ကိုဖြည့်လောလောလတ်လတ်မြေပြင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူဖြန်းသို့မဟုတ်ပဲပူးတှဲဖြည့်ထံမှအစိမ်းရောင်နှင့်ချပ် components နဲ့အလှဆင််ထမ်းဆောင်မတိုင်မီထိပ်ပေါ်မှာပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း။
မည်သည့်ပန်းကန်အစိမ်းရောင်, chives, သံပုရာချပ်သို့မဟုတ်ထုံးဖျော်ရည်နှမ်းမျိုးစေ့များနှင့်ကိုက်ညီရန်အလှဆင်။
မုန်မတူဘဲဆော်လမွန်ငါးကောင်ဆီဥနှင့်မျိုးကွဲဖန်တီးသောအခါပိန်အမဲသားဗားရှင်း, ဒီ component တစ်ခုခြင်းမရှိဘဲလျော့နည်းရေနံဆီထည့်သို့မဟုတ်လုပ်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းရပါမည်။
ဆော်လမွန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - လတ်ဆတ်တဲ့တန်းပါနှစ်ဦးစလုံးထံမှနှင့်ဤအမှု၌ဆားသို့မဟုတ်သောက်သည်၏ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်ကိုစာရွက်။ သဘာဝငါးအရသာရွှဲဤနေရာတွင်နံ့သာများနှင့်ရာသီ၏ပိုလျှံငွေပမာဏကိုကြားဖြတ်မရသင့်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာ, သငျသညျအပျော့ဒိန်ခဲ Philadelphia တွင် add, နှင့်ပန်းကန် caviar ဖြည့်ဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါနိုင်ပါတယ်။
သောက်သည်ဆော်လမွန်ငါး - 200 ဂရမ်;
shallots - 1-2 PCs; ။
ချဉ် gherkins နှင့် capers -3အပိုင်းပိုင်း။ သို့မဟုတ် 1 tbsp ။ ဇွန်း,
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
သေးငယ်သော shallots နှင့် Pickled gherkins နှင့် capers ခုတ်။
အစိတ်အပိုင်းများချိတ်ဆက်ပါ, သံပုရာဖျော်ရည်များနှင့်ငရုတ်ကောင်း add, မွှေပေးပါ။
တစ်အရသာငါးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအောင်မြင် Make နှင့်ဆားဆော်လမွန်။ ပိုများသောလန်းဆန်းမှတ်စုအဖြစ်ထုတတ်နိုင်သမျှဖြတ်ခံရသင့်သောချိုမြိန်ငရုတ်ကောင်း, ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငံပြာရည်အားလုံးမဟုတ်ဆီထည့်ဖို့လိုအပ်ပေမယ်သာ3tbsp ပါလိမ့်မယ်။ ဇွန်း။ ကျန်ရှိသောသည်အခြားမုန်နှင့်အစားအစာများကိုဖြည့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါး - 200 ဂရမ်;
ကြက်သွန်အနီ - 0.5 ps; ။
chives နှင့်ဇီယာစေ့ - 0.5 ရောင်ခြည်;
ငရုတ်ကောင်း - 0.5 ps; ။
။ ဖြူသောစပျစ်ရည်ရှာလကာရည် - 1 Tsp,
rapeseed ရေနံ - 0.5 ခွက်;
ချိုမြိန်မုန်ညင်း - 50 ဂရမ်,
သကြား - 2/3 အနုပညာ။ ဇွန်း,
ငါး, ငရုတ်ကောင်း, အနီနှင့်အ chives ချလိုက်တယ်။
မုန်ညင်း, ရှာလကာရည်, သကြား, စမုန်နက်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူရေနံရောနှော,3ဇွန်းငါးငံပြာရည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
လှုံ့ဆော်မှုပေးပြီးသွားကျောက်တည် ဆော်လမွန်ငါးဆားနယ် ထိထိရောက်ရောက်ပန်းကန်နှင့်အလှပြင်ဆင်ရေးအတွက်လက်စွပ်ကို အသုံးပြု. ထွက်တင်သောနှင့်အောင်ကျွေး။
သင်ပြုတ်သို့မဟုတ်ကြော်ပုစွန်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လျှင်ငါးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း, အထူးသဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်မူရင်းအရသာဖြစ်လာသည်။ သခွားသီးကုန်တယ်ထောပတ်သီးနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အောင်ပွဲခံပန်းကန် feed ကိုအနီရောင် caviar ဖြည့်စွက်, သင်မူကားကြော်ပုစွန်နှင့်အစိမ်းရောင်တစ်ခုတစ်ခုလုံးကို appetizer ကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးတန်း - 200 ဂရမ်;
ပုစွန် - 200 ဂရမ်;
သခွားသီး - 1 pc; ။
chives -2ဇွန်း။ ဇွန်း,
ထုံး - 1 pc; ။
သံလွင်ဆီ - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, ဇီယာစေ့။
ကုန်တယ်ငါးလွှာ, သခွားသီး, အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီနှင့်ဇီယာစေ့။
, ထုံးဖျော်ရည်နှင့်အတူညှစ်ဆီနှင့်ရောထွေး, ဆား, ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။
ငံပြာရည် basting, တစ်ပန်းကန်အလွှာသခွားသီး, ငါး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပုစွန်အပေါ်ထားကြ၏။
ထောပတ်သီးနှင့်အတူမုန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - စာရွက်
Next ကိုဘယ်လိုထောပတ်သီးနှင့်အတူဆော်လမွန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းချက်ပြုတ်ရန်။ အသီး၏အသားတစ်ဦးကွဲပြားထို့အပြင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောငါးတန်းဖြစ်ပြီးသိသိသာသာချောရေစာများ၏အရသာဝိသေသလက္ခဏာများပြောင်းလဲ။ သခွားသီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောပတ်သီးပျော့ဖတ်၏အဘို့ကိုတိုးမြှင့်, ဆက်ပြောသည်မရထားဖို့လိုပါမယ်။ အဲဒီအစားအနီကြက်သွန်သို့မဟုတ် shallots ဝတ်စုံကို chives ၏။
ထောပတ်သီး - 1 pc; ။
အနီရောင်ကြက်သွန်နီ - PCs ¼; ။
ပိုးစာမုန့် - 1 Tsp ;.
သေးငယ်သောငါးတန်းပါ, ကြက်သွန်, သခွားသီးနှင့်ထောပတ်သီးပျော့ဖတ်ကုန်တယ်။
ငါးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - ငါးတန်းပါတစ်ချိန်တည်းအများအပြားအမျိုးပေါင်းမှာပေါင်းစပ်နိုင်သည့်စာရွက်။ အောက်ပါတို့သည်ဆော်လမွန်ငါးကိုခွဲတူနာငါးတန်းပြည့်စုံသောမုန်၏ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ထောပတ်သီးငါးဖမ်းအခြေခံများအတွက်ခေါငျးအုံးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, သို့သော်လူ့ဇာတိသို့ဖြတ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်မှ add နိုင်ပါတယ်။
ဆော်လမွန်ငါးတန်း - 140 ဂရမ်;
တူနာငါးတန်း - 100 ဂရမ်;
shallots - 1 pc; ။
နှမ်းရေနံနှင့်ပဲပိစပ်ဆော့စ် - 10 ml ကို;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 30 ml ကို;
သံလွင်ဆီ - 40 ml ကို;
ပိုးစာရှာလကာရည် -5ml ကို;
ဆား, ငရုတ်ကောင်း, နံနံ, နှမ်း။
ထောပတ်သီးပျော့ဖတ် plug ကို, ဆက်ပြောသည်ဆား, ငရုတ်ကောင်း, သံပုရာဖျော်ရည်ကို mashed, ပထမဦးဆုံးလက်စွပ်အလွှာတွင်ချထားပါသည်။
ရေနံ, ပဲပိစပ်ဆော့စ်, ရှာလကာရည်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်နံနံနှစ်မျိုး, ကြက်သွန် Add
အဆိုပါထောပတ်သီးအပေါ်ဆော်လမွန်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းပြန့်နှံ့, လက်စွပ်ကိုဖယ်ရှား, နှမ်းရေစာနှင့်အတူဖြန်း။
အနီရောင်ငါးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း အတွက်မိတ္တူအလွန်သေးငယ်လျှင်မကြာခဏ, ငါးများကဲ့သို့ဖြတ်သို့မဟုတ်လုံးဝစွန့်ခွာနေကြရသော Pickled capers နှင့်အတူချက်ပြုတ်နေသည်။ ငါးဖြတ်တောက်မှု၏လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုပူးတှဲ shallots မည်အကြောင်း, chive အမွေးတစ်ဦးပုံစံမျိုးဒြပ်စင်အဖြစ်ပိုပြီးဝတ်ပြုကြလော့။ အမွေးအတောင်တစ်နည်းနည်းဖြတ်ဖွဲ့စည်းမှုမှ add နှင့်ထိပ်ပေါ်မှာအရာကြွင်းလေရေစာကိုအလှဆင်ဖို့နိုင်ပါသည်။
ဆော်လမွန်ငါးတန်း - 500 ဂရမ်;
ချဉ် capers -2ဇွန်း။ ဇွန်း,
shallots -3PCs; ။
သံလွင်ရေနံနှင့်ပဲပိစပ်ဆော့စ် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - မြည်းစမ်းရန်,
ငရုတ်ကောင်း, chives ။
အလေးချိန်ကိုမြည်းစမ်းဖို့ရေနံ, ပဲပိစပ်ဆော့စ်နှင့်သံပုရာဖျော်ရည်များနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူ seasoned ကုန်တယ်ငါး, ကြက်သွန်နီနှင့် capers ။
ငါးပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - မကြုံစဖူးလတ်ဆတ် zest ဆလရီအညှာနှင့်အချဉ်ပန်းသီးအစိမ်းရောင်အမျိုးပေါင်းထည့်သွင်းရရှိသည်ကြောင်းစာရွက်။ ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပန်းရောင်ယူဖို့သံလွင်ဆီ walnut ရေနံအစားထိုးခြင်း, အစားအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူမြေပြင်ငရုတ်ကောင်း၏အားဖြင့် palette ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပန်းသီးပျော့ဖတ်နှင့်ဆလရီ - 20 ဂရမ်,
သံလွင်ဆီ - 20 ml ကို;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 10 ml ကို;
parsley - 20 ဂရမ်,
peeled ပန်းသီးနှင့်ဆလရီ, ငါးခုတ်ဖြတ်။
, ကုန်တယ် parsley, သံပုရာဖျော်ရည်, ရေနံနှင့်ငရုတ်ကောင်း Add ရောနှောတစ်ပန်းကန်ပေါ်ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်, ပန်းသီးချပ်နှင့်အတူအလှဆင်။
အရသာပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း သခွားသီးအလှည့်နှင့်အတူဆော်လမွန်၏။ ခက်ခဲတဲ့အသားအရေနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါကပိုကောင်းသန့်ရှင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြတ်တောက်မီ။ သငျသညျ shallots သုပ်ကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်ကုန်တယ် chives အစားထိုးရန်နှင့်ခေါင်းအုံးအဖြစ်ကောက်သို့မဟုတ် Borodino မုန့်များအသုံးပြုမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဆားနှင့်လတ်ဆတ်သောမျြးစိမျ့စိမျ့ငါးတန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
သခွားသီး - 200 ဂရမ်;
သံလွင်ရေနံနှင့်ပဲပိစပ်ဆော့စ် - 20 ml ကို;
။ သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 1 Tsp,
အဆိုပါဆော်လမွန်ငါး, သခွားသီး, ကြက်သွန်ချလိုက်တယ်။
မြည်းစမ်းဖို့သံလွင်ဆီ, ပဲပိစပ်ဆော့စ်နှင့်သံပုရာဖျော်ရည်များနှင့်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ငါး dosalivat ရေစာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။
ဒယ်အိုးထဲမှာ hake ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူ beetroot သုပ် - ဗီတာမင်မူရင်းအားလုံးအရသာကိုက်ညီဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းလျာများ recipes!
အဆိုပါ lavash အတွက်ငါး
Duck ခြေထောက် - အားလုံးအရသာကိုက်ညီမှမူရင်းဟင်းလျာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်နည်းများ!
တစ်ဦး shish kebab ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဆူဒန်နှင်းဆီ (hibiscus) - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ညနေခင်းတွင် run ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Raspberry ယို - ဆောင်းရာသီမှာအဘို့မွှေးကြိုင်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ကလေးဗတ္တိဇံ - သင်သည်ငါ့မိခင်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသလား
ဇန်နဝါရီလအတွင်းအားလပ်ရက် - ဘယ်မှာသွားပါသလော